Ahoana no hampitomboana ny Twitter aorian'ny | Martech Zone
Talata, Oktobra 11, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Mety hampihomehy ho an'ny lehilahy iray izany Mihena ny Twitter manaraka mandefa an Infographic momba ny fampitomboana ny fanarahana anao… Fa hazavaiko kosa.
Tamin'ny volana lasa dia nanadio kaonty an'arivony maro izay narahiko tao amin'ny Twitter aho. Nanaraka kaonty 30k teo ho eo aho, saingy nodioviko hatramin'ny ambany 5k ary manohy manadio azy io. Rehefa nanary ireo kaonty spammy aho dia nijanona tsy nanaraka ahy ireo kaonty ireo… nahatonga ny mpanaraka ahy hihena.
Tsy naharaka namana maro tsy nahy aho ary nahita alahelo tamin'izany. Raha nanara-dia anao aho - apetraho fotsiny aho naoty ary hanaraka ahy aho… tsy zavatra manokana izany. Tsy nanara-dia fotsiny ny fanarahana ireo olona sasany aho. Na izany na tsy izany, miverina amin'ny Infographic! Twiends dia nanambatra ity takelaka tendrena ity momba ny fampiroboroboana ny twitter anao ary sady tsara tarehy no feno.
Ny tena tiako indrindra amin'ity toro-hevitra ity dia ny toro-hevitra matanjaka amin'ny fampitomboana olona manaraka mahaliana. Raha mandeha mividy mpanaraka ianao na aiza na aiza, dia mety manana isa ambony ianao, saingy ho safotry ny spam ianao. Ny Twitter dia niasa mafy tamin'ny fampitomboana ny isany, hany ka simba avy ao anatiny ny rafitra amin'ny alàlan'ny spam. Ny tranga mazava dia ny tsy fahafahan'ny olona manara-dia amin'ny besinimaro. Tsy avelan'ny Twitter ianao… fa tsy manana olana izy ireo raha manara-maso marobe ianao. Moana io. Raha niasa tamin'ny kalitaon'ny atiny tao amin'ny lampihazo ny Twitter ary nanala ireo mpijirika - hihatsara ny kalitao ary olona maro no ho liana amin'ilay sehatra.
Ity misy fomba Mitombo ny fanarahana ny Twitter:
Mianara milalao tsara
12 Okt 2011 amin'ny 4:20 PM
Nanana mpanaraka kely sy lasibatra indrindra tao amin'ny Twitter foana aho. Saingy heveriko fa amin'ny taona vaovao. Mety hampiasa vola amin'ny TweetAdder aho. Mba ahafahako manao automatique kely fotsiny ny dingana.
12 Okt 2011 amin'ny 7:39 PM
Heveriko fa manana endri-javatra lehibe vitsivitsy ny TweetAdder… fa misy ihany koa ireo endri-javatra mampidi-doza. Ohatra, tena tiako ny fahaizana mikaroka amin'ny alàlan'ny mombamomba sy misintona lisitra nokendrena. Na izany aza, misy ny fahafahana lehibe hanararaotra ny rafitra raha tianao. Mandehana amim-pitandremana ary aza alaim-panahy hanararaotana izany.
13 Oktobra 2011 à 2:01
Henoko izay lazainao. Izany no mahatonga ahy tsy hanampiako afa-tsy olona izay arahako sy tsy araho amin'ny tanana. Fantatro fa amin'ny TweetAdder dia afaka manao izany ho azy ianao amin'ny hafa
zavatra. Saingy somary mailo ihany aho amin'ny fanaovana izany.
14 Oktobra 2011 à 10:30
Ity dia fomba fijery mahafinaritra ataon'ny vorona momba ny atao sy tsy azo atao. Misaotra ny fizarana.